Wiilkii ku caan baxay “AR FARMAAJO II GEEYA” oo ka mid ah noqon doonno shaqaalaha Villa Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wiilkii ku caan baxay “AR FARMAAJO II GEEYA” oo ka mid ah noqon doonno shaqaalaha Villa Soomaaliya
Wiilkii dhalinyarada ahaa ee ku caan baxay “AR FARMAAJO II GEEYA” islamarkaana xalay la kulmay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa la sheegayaa inuu ka mid noqon doonno shaqaalaha ka howlgali doonno xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Wiilkaan oo lagu magacaabo C/laahi Maxamuud Cismaan (Daanyeerow) ayaa dhawaan muuqaal laga soo duubay isagoo ku hidaaqaya ereyadda “AR FARMAAJO II GEEYA”, lagu baahiyay baraha ay bulshada ku xiriirto, isagoona ugu dambeyn ay u suurto gashay in habeenkii xalay uu Hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho kula kulmo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.
Sidoo kale, wiilkaan oo la sheegayaa inuu madaxweyne Farmaajo ku wargeliyay inuusan dib ugu laaban doonin magaalada Jowhar, ayaa warar aan la xaqiijin oo haatan soo baxaya sheegayaan in ninkaasi uu noqday qofkii ugu horeeyay ee uu madaxweyne Farmaajo ka shaqaaleysiiyo Villa Soomaaliya.
C/laahi Daanyeerow ayaa hore u ahaa beeralay ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, wuxuuna ka mid ahaa dadkii shacabka ahaa ee ka qeyb galaayay banaanbaxyadii lagu taageeraayay guushii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Dhinaca kale, ma jiro warar madax banaan oo xaqiijinaya in wiilkaasi dhalinyaradda ah laga shaqaaleysiin doonno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo inkale, inkastoo mar la weydiiyay arrinkaasi uu beeniyay.